Daaweynta Protatite: ActiPotens Waxay Qaban Doonaan Waxyaabaha - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB • DARYEELKA CAAFIMAAD • Galmada iyo xiriirada »Daawee prototit: ActiPotens samayn lahayd yaabab
Eliseo Emma Kamgang 9 March 2019
sideen u qarinaynaa daawada ugu fiican ee lagu daaweyn karo prostatitis!
Daroogada cusub, ActiPotens, taniyo sanadihii 2 waxay ka caawisaa ragga Maraykanka in ay si buuxda uga takhalusaan prostatitis, taas oo sababa cillad aan caadi ahayn. Markii ugu horeysay, daawo ayaa loo oggolaaday, oo ay ugu mahad celineyso hal daroogo, saameyn ku daweyn iyo dib-u-cusbooneysiin.
Waxtarkeeda waa dhowr jeer ka badan daawooyinka kale ee loogu talagalay in lagu daaweeyo prostatitis iyo hagaajinta awoodda, oo ay ku jiraan Viagra, sababtoo ah ma aha oo kaliya sababo deg-deg ah oo degdeg ah kadib marka la qaato, laakiin sidoo kale soo celiyo awooda dabiiciga ah Wax saameyn ah ma lahan (midna)
Si kastaba ha ahaatee, dad badan ma oga. Marka la barbardhigo, waxaan ku sii jirnay daroogo caan ah oo hoos ku qoran:
saamaynta Daawee prostatitis iyo dayactirka dabeecadda dabiiciga ah muddo dheer Dheecaan macmal ah (aan caadi ahayn) ee 2 saacadaha 6.
Saameyn dheeraad ah
Wuxuu hagaajiyaa libido
Wuxuu kordhiyaa muddada falgalka galmada
Waxay xoojisaa marinnada dhiigga
Daaweynta prostatitis ee mudada dheer
Xaaladda jireed oo wanaajiyay
Xanuunka, xanuunka, dareenka gubashada ee gumaarka iyo dhabarka hoose ee baaba'aya, bararka ayaa la joojiyaa
Wuxuu burburiyaa mashiinnada dhiigga iyo muruqyada wadnaha
Waxay kordhisaa khatarta wadno xanuunka iyo istaroogga by 5 wakhtiyada 7
Waxay sababtaa barar ku dhaca xubinta taranka, hypoglycemia, dhibaatooyinka kaadida
Madax xanuun joogto ah
prostatitis daba-galka ah
hab Dib u soo celinta hawsha prostateka oo wuxuu xakameynayaa ilnimada Waxay sababtaa istaagidda dhiigga ee guska oo aan caadi ahayn, ka hortagga guska in uu lumiyo koritaankiisa
Muddada saamaynta Dhamaadka daawo, saameyntu waa joogto Saamaynta ku-meel-gaadhka ahi waxay socotaa waqtiga qaadashada
maaddooyinka Qaybaha dabiiciga ah ee dhirta, fitamiinnada iyo dhirta dhirta oo aan la daaweynin Sildenafil, glucosamine hydrochloride iyo walxo kale oo ka yimaada daaweynta kiimikada
Saameynta ActiPotens ayaa lagu cadeeyay 5 sano oo tijaabo caafimaad ah, marxaladda ugu dambeysa ee lagu xalliyo daaweynta tabarrucayaasha 1753. 100% maadooyinka ayaa ka takhalusay dhibaatooyinkooda prostate iyo firiiro. farsamada yaabka leh laygu, 42% maadooyinka ayaa loo tixgeliyey bukaanno qalafsan oo aan la daweyn karin Midkood maandooriyeyaasha hadda jira ayaa bixin kara natiijooyin isku mid ah. Dhibaatadani waxay dib u soo celisaa firiiricda dabiiciga ah, ee ma ahan kaliya buuxinta ku-meel-gaadhka guska oo dhiig leh.
Farmashiyeyaasha Yurub ayaa isla markiiba bilaabay suuq-geynta sheyga, iyo ilaa taariikhda waa lambarka hogaaminta 1 baadhitaano caafimaad oo la beegsaday iyo sahan qarsoodi ah oo aan qarsoodi ahayn. Sidaa darteed maxaan u heleynaa isaga oo aan farmashiye ku heleyno? Kaliya wakiilada warshadaha daawada ayaa ka jawaabi kara su'aashan. Si aad u ogaato runta, waxaan waydiisanay Pauk Alamoudy, oo ah agaasimaha shirkad weyn oo farmashiyo ah.
Pauk, miyaad taqaanaa ActiPotens daroogada? Sidee u sharaxeysaa in farmasiyada ay iska dhego tirto?
Wax walba waa mid macquul ah. Inkasta oo warshadaha dawo-bixinta ahi ay dadka siinayaan daroogo cusub iyo kuwo waxtar badan, waa in la xusuustaa in tani ay tahay ganacsi. Tani waxay si gaar ah u tahay run ahaanshaha silsiladaha farmashiyaha - kuwan oo kaliya waxay sameeyaan balaayiin doolar oo faa'iido ah isla markaana yareeyaan mugga - taasi waxay keeni kartaa khasaare daran!
ActiPotens ayaa soo maray Dhammaan shahaadooyinka si farsamo leh iyo dhamaan ciyaartoyda waaweyn ee farmashiyaha ayaa si sax ah u ogaanaya. Xusuusnow, waxa ugu muhiimsan waa in la daaweeyo prostatitis, sidaa daraadeed, waxa uu soo celiyaa firfircoonida dabiiciga ah, taas oo cudurku isbeddelayo, mana siinayo saameyn ku meel gaar ah! Tani waxay ka dhigan tahay in qofna uusan ku noqon doonin inuu dib u iibsado. Taasi waa in la yiraahdo mugga ayaa hoos u dhigi doona! Waa noocee ganacsade awood u leh inuu maalgaliyo noocan oo kale ah?
Xaqiiqdii, haddii qof kasta uu ku jiro caafimaad wanaagsan, yaa u baahan doona dhammaan daroogooyinkaas? Farmashiyayaashu waxay si toos ah u tagi doonaan bangiyada sababtoo ah waxaa lagu noolyahay dad caadi ah! Tani waa nasiib daro murugo leh.
Nasiib darro, waddankayaga waa inaan raadinnaa daawooyinka dhabta ah ee naftaada; Qofna lagama hadlayo si fudud! Hana xitaa ha rajeynin inaad kaniinigaas ku aragto TV-yada. Dadka kale ee yurubiyan ah iyo Maraykanku waxay noqon doonaan kuwo caafimaad qaba waxayna ku raaxaystaan ​​nolosha inta aan dhakhtarka booqanno bil kasta.
Xaqiiqdii, waxaa jira hal hab oo lagu daaweynayo naftaada - adoo amaraya ActiPotens bogga rasmiga ah ka soo saaraha.
Kansarka: caafimaadka maskaxda waxay saameysaa halista dhimashada
Garlic, waa antibiyooti awood leh!